Wholesale Women's Fashion Striped Scarf Supplier uye vagadziri | Xingliao
pu uye dehwe regirazi
jira kusona gurovhosi
Ski glove uye mitten
Vakadzi Vemafashoni Akakwenenzverwa Scarf
Yakajairika Discount China 2020 Masitaera Vakadzi Mafashoni 100% Cashmere Square Scarve ine Akanaka Eyelash Fringe
Nzvimbo yeKutanga: Zhejiang, China
Zvinoumba: 100% polyester
Saizi: 180x40 + 12cm
Kurongedza: yega polybag / 30 pcs paatenzi katoni
Kutumira Info: 60x40x30
GW uye NW: 9 / 7.5 makirogiramu
Nguva yekubhadhara: T / T kana L / C.
Nguva yekuendesa: anenge mazuva makumi mashanu mushure mekusimbiswa
Sampling nguva: kwakakomberedza mazuva 7-10
Mutengo izwi: FOB kana CIF China chiteshi
Vakadzi Vemafashoni Akakwenenzverwa Scarf Inzwa Yakare Yakapfava Yakasarudzika Nguva yechando Scarf YEMAHARA, YEMAHARA NEMAHARA YEMAHARA, aya masikisi akapfava, akasununguka paganda
Isu tinogara tichiita mweya wedu we "Innovation kuunza kufambira mberi, kuverengera Kwakanyanya-mhando kuraramisa, Kiredhiti inokwezva vatengi veSpecial Dhizaina yeChina Men's Fashoni Chando Scarf Yakareba Muffler Kuputira Shawl Yakakurumbira 100% Acrylic Shawl / Poncho / Cape / Kuputira / Scarf. Ichi ndicho chigadzirwa chekambani yedu chinotengesa zvakanyanya. Iyo yepamusoro-yekuzadza ruvara rwechirafu inoita kuti uwedzere kusimba uye kudziya. Tinogamuchira noushamwari tarisiro dzose dzinokatyamadza dzekutaurirana nesu kuti uwane rumwe ruzivo.
Yakasarudzika Dhizaina yeChina Acrylic Scarf uye mutengo weShawl, mhando zhinji dzezvinhu zvakasiyana siyana zviripo iwe pachako kusarudza, unogona kuita imwechete-yekumira kutenga pano. Uye zvakagadziriswa mirairo zvinogamuchirwa. Bhizimusi chairo ndere kuwana kuhwina-kuhwina mamiriro, kana zvichibvira, isu tinoda kupa yakawanda rutsigiro rwevatengi. Gamuchirai vese vatengi vakanaka kutaurirana ruzivo rwekutengesa nesu !!
Tinogona kutaura tiine chokwadi chechokwadi chekuti pamhando dzakadai pamitengo yakadai tange tiri vepasi pasi kune OEM Mugadziri China Yakabvarurwa Rwodzi-Yakasungwa Makarodhi eVakadzi Kupfeka NdeyeMafashoni Yekusona, Kurwira zvakaoma kuti uwane kuramba uchiita zvakatemwa nemhando yepamusoro. , kuvimbika, kuvimbika, uye kunzwisisa kwakazara kwesimba remusika.
OEM Mugadziri China rakarukwa chirafu mutengo, panguva yekusimudzira, kambani yedu yakavaka inozivikanwa brand. Inonyatso rumbidzwa nevatengi vedu. OEM neODM zvinogamuchirwa. Tanga tichitarisa kubatana.
Pashure: Yakanaka Yemhando Scarf - Yakakora Cable Knit Kuputira - Xingliao
Zvadaro: Vakadzi Plaid Blanket Scarf
yakaongororwa boucle bias cut scarf
zabra mutsetse, houndstooth uye herringbone jacqua ...
Disney vana vakaruka ngowani
evarume dzakarukwa magiravhusi pamwe polar nemvere Li ...
Kero:Kamuri 704 Huarong Times Mansion, No. 3880 Jiangnan Avenue, Hangzhou China